Kedu ihe bụ na otu esi esi enweta mmiri iyi? Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị nụla banyere ya convection ugbu a mgbe anyị kwurịtara ihe dị iche iche akwa ụwa. Mgbe anyị na-ekwu maka ntụgharị ntụgharị nke dị n’ime ụwa, anyị na-ekwu maka ọdịiche dị n’ụdị nke ihe ndị mebere uwe elu ụwa. Enwe mmiri na-ebugharị dị ka mmiri nke na-agagharị n'ihi na enwere esemokwu na ọnọdụ okpomọkụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ya.
1 Kedu ihe bụ convection currents
2 Gini mere o ji na - aputa irughari?
Kedu ihe bụ convection currents
Mgbe anyi choputara mmiri onunu na n’aghari n’ihi e nwere ihe dị iche na okpomọkụ ma ọ bụ njupụta anyị nwere convection okwukwo. Ka ụdị ihe a dị ugbu a, ọ ga-enwerịrị mmiri mmiri, ma ọ bụ nke mmiri ma ọ bụ nke gas. Nke a bụ n'ihi na a na-edozi ihe ndị ahụ n'ime ihe siri ike ma ghara imegharị, yabụ, ị gaghị ahụ ọfụma n'ihi ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ na oke.
Ihe dị iche n'etiti okpomọkụ nke otu mpaghara ma ọ bụ ọzọ n'ime otu ihe ahụ bụ ihe na-akpata nnyefe ike site na mpaghara buru ibu gaa na obere. Ntughari na-eme rue mgbe enwere ngụkọta zuru oke. Mgbe usoro a mere n'ihi ntụgharị okpomọkụ, a na-emepụta okwukwo nke ihe na-esi n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Yabụ, a na-ahụta ya dị ka usoro nnyefe oke.
Ntughari mmiri na-eme site na dị ka a na-akpọ ha free convection. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ntụgharị a na-eme n'ime ngwa dịka fan ma ọ bụ mgbapụta, a na-akpọ ya convection mmanye.
Gini mere o ji na - aputa irughari?
Typedị ihe ịtụnanya a na - eme n’ihi ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche nke na - eme ka ụmụ irighiri ihe na - eme ka ọ dị ugbu a. Ugbu a nwekwara ike ime mgbe enwere ọdịiche na njupụta. Dị ka ọ na-adị, usoro ahụ na-aga na ntụpọ site na ebe okpomọkụ dị ma ọ bụ njupụta dị elu ruo ebe enwere obere okpomọkụ na oke. Mmiri iyi ndị a na-ewerekwa ikuku. Igwe ikuku nke ikuku na-efe na ntuziaka site na ebe enwere njuputa rue ebe pere mpe. N'ihe banyere oké ifufe, mpaghara nrụgide dị ala ga-abụ ihe mgbaru ọsọ nke ikuku ifufe.
Nke a bụ ihe na - eme ka nsogbu dị ala bụrụ ebe mmiri na - ezo na ọbụna oké ifufe. Mgbe ihe dị ugbu a na-enyefe ọkụ site na mpaghara ike dị elu na mpaghara ike dị ala, ntụgharị a na-eme. Na gas na plasma, ájá na okpomọkụ dị n'etiti na-edugakwa na mpaghara nke njupụta dị elu na ala, ebe atọm na mkpụrụ ndụ na-agagharị iji jupụta ebe ndị na-enweghị ihe ọ bụla. Enwere ike ikwu na ụzọ a chịkọtara na mmiri ọkụ na-ebili mgbe ndị oyi na-agba mmiri na-aga n'ihu.
Nke a ga - eme ọfụma belụsọ na e nwere ebe ike si enweta dị ka anwụ ma ọ bụ okpomoku nke na - agbanwe ụzọ iyi ndị a. Mmiri na-ebugharị na-eme ruo mgbe ọnọdụ okpomọkụ na njupụta dị otu. Na ọnọdụ okpomọkụ na njupụta zuru oke na oyi akwa nke ụwa dị mgbagwoju anya. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na kọntinent kọntinent dị na okike na mbibi na-aga n'ihu, ya mere, nke isii na-aga n'ihu na-etinye ihe dị iche iche nke okpomọkụ na njupụta dị iche iche na mkpuchi ụwa. Ghara ikwu okpomọkụ dị n'ime isi.
Ihe ndị dị n’ime ime ụwa anyị a siri ike n’ihi nrụgide siri ike dị na etiti. Isi mpụga, n'aka nke ọzọ, nwere ihe ndị nwere mmiri n'ihi na, ọ bụ ezie na ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu, enweghị nrụgide dị ike dị otú ahụ.
N'ihi iwebata ihe a na-aga n'ihu yana ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ na njupụta dị oke elu, enwere ike iyi mmiri a na-akpọ convection ma bụrụkwa ihe kpatara ngagharị nke Efere Tectonic.
Iji nwee ike itinye ụfọdụ ihe atụ na-eme ka ihe a dokwuo anya, anyị ga-akọwa ihe ndị a: ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha ikike ndị na-eme ihe na mmiri iji nwee ike ịkọwa ha ma ghọta ntụgharị. Ike ndị a nwere ike ịgụnye ike ndọda, esemokwu elu ala, mpaghara electromagnetic, ịma jijiji, iche echiche dị iche iche, yana njikọ nke njikọ n’etiti ụmụ irighiri ihe. Enwere ike ịkpụzi ike iyi ndị a ma kọwaa ya site na iji usoro nha dị iche iche.
Ihe omuma atu nke mbufe mmiri nwere ike buru nke esi site na esi mmiri n’ime ite. Ozugbo a gbakwunyere peas ole na ole ma ọ bụ mpempe akwụkwọ iji soro usoro a dị ugbu a, ị ga-ahụ etu isi ọkụ nke dị n'ime oghere ahụ si eme ka mmiri sie mmiri ma nye ya ume, na-eme ka ụmụ irighiri ihe na-aga ngwa ngwa. . Mgbe a na-ewebata ihe ahụ na obere okpomọkụ ọ na-emetụtakwa njupụta nke mmiri. Ka mmiri na-agagharị n’elu ala, ọ na-ahapụ ike ụfọdụ na-agbapụ n’ụdị uzuoku. Evaporation na-eme ka mmiri dị jụụ nke ọma maka ụfọdụ ụmụ irighiri mmiri ka ha laghachi azụ na ala nke ite ahụ.
Ihe omuma atu ozo nke ikuku oku di oku bu nke na eme n'ime ulo mgbe ikuku gbagoro n’elu ụlọ ma ọ bụ n’elu ụlọ. Nke a bụ n'ihi na ikuku na-ekpo ọkụ pere mpe karịa ikuku oyi ka ọ na-arị elu. Dika anyi kwuburu na mbu, anyi puru iji ikuku hu ya. Ìhè anyanwụ na radieshon na-eme ka ikuku dị na mbara igwe dị ọkụ ịmepụta ihe dị iche iche na-eme ka ikuku na-agagharị. Na steeper ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti otu mpaghara na mpaghara ọzọ, nke ka ukwuu na ikuku ikuku. Nke a bụ n'ihi na ikuku ndị ọzọ ga-esi na mpaghara nrụgide dị elu karịa mpaghara nrụgide dị ala.
Enwere m olileanya na site na ihe atụ ndị a, ọ bịara dokwuo anya ihe mmiri iyi na-asọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Osimiri ntụgharị